राष्ट्रपतिद्वारा एकाएक राजीनामाको घोषणा, यस्तो छ कारण — Sanchar Kendra
राष्ट्रपतिद्वारा एकाएक राजीनामाको घोषणा, यस्तो छ कारण
काठमाडौं । पछिल्लो समय मुलुकमा बढेको भ्रष्टाचार, हिँसा, राजस्वमा गरिएको वृद्धि रोक्न र सुशासन कायम गर्न नसकेको भनी चौतर्फी आलोचनासँगै सरकारी मितव्ययी कदमहरूको विरुद्धमा ठूला-ठूला प्रदर्शनहरू भएपछि राष्ट्रपतीले एकाएक राजीनामा दिने घोषणा गरेका हुन ।
चौतर्फी आलोचना र नागरिकको ब्यापक बिरोधका कारण पछिल्ला दिनमा राष्ट्रपती अलोकप्रिय बन्दै गएसँगै उनका बिरुद्ध देशमा लगातार विरोधप्रदर्शनहरू भएपछी उनले एकाएक आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । तर प्रदर्शनकारीहरुले पद छोड्न राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिबद्धतालाई विश्वास गर्न नसकिने भन्दै तत्काल राजीनामा दिन माग गरिरहेका थिए ।
आफूविरुद्ध व्यापक प्रदर्शन, जनस्तरबाट विरोध तथा सेनाले पनि विकल्प खोज्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि उनले राजीनामाको घोषणा गरेका हुन् । यो अल्जेरियाकाे खबर हो । केही सातादेखि आफुरद्ध प्रर्दर्शन हुँदै आएपछि अल्जेरियाका राष्ट्रपति अब्दुलअजिज बुतेफ्लीकाले राजीनामा दिएका हुन् ।
विगत दुई दशकदेखि सत्तामा रहँदै आएका उनी यसपटक चुनाव नलड्ने र यही अप्रिल २८ तारेखका दिन आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि पद छोड्न सहमत भएपनि प्रदर्शनकारीहरुले भने उनले तत्कालै पद छोड्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए । उनी विगत ६ वर्षदेखि मुटु सम्बन्धी रोगका कारण सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी भएका छैनन् ।
त्यस्तै युरोपेली यूनियनबाट बेलायत बाहिरिने ब्रेक्जिट प्रक्रियाको गतिरोध फुकाउन बेलायती संसद फेरि पनि असफल भएको छ । वैकल्पिक प्रस्तावहरूमा ब्रिटिश सांसदहरू यसपल्ट पनि सहमत हुन सकेनन् ।
तल्लो सदन हाउस अफ कमन्स्मा प्रस्तुत गरिएका चारवटा प्रस्तावमा कुनैले पनि बहुमत जुटाउन सफल नभएपछि यो प्रक्रिया थप अनिश्चित बनेको छ । यसअघि पनि ब्रेक्जिटको भावी दिशाका वैकल्पिक उपायहरुमा प्रधानमन्त्री टेरेजा मे असफल भएकी थिइन ।
कानुनी रूपमा बाध्यकारी नहुने भए पनि यी प्रस्तावहरू सरकारका लागि आगामी मार्ग तय गर्न सहयोगी ठानिएका थिए । यसअघि नै प्रधानमन्त्री मेले ईयुसँग तयार पारेको बहिर्गमन योजना समेटिएको सम्झौता संसद्मा तीनपटक अस्वीकृत भइसकेको छ ।
बहिर्गमन सम्झौतालाई मे ले चौथोपटक पनि संसद्मा ल्याउन सक्ने बताइएको छ । उनीसँग बहिर्गमन प्रक्रियाको अवधि लम्ब्याएर नयाँ बाटो रोज्ने वा बिना सम्झौता ईयू छाड्ने विषयमा निर्णय गत १२ अप्रिलसम्मको समयसीमा छ । प्रधानमन्त्री मे बेलायत ईयु बजारमा रहने कुराको शुरूदेखि विरोध गर्दै आएका छन् ।
यसैबिच दिल्ली महिला आयोगले भारतको राजधानी सहर नयाँदिल्लीका विभिन्न स्थानबाट छापा मारी १२ जना नेपाली किशोरीको उद्धार गरेको जनाएको छ । उद्धार गरिएका किशोरीले एकजना उदय नाम गरेका व्यक्तिले दुबई र खाडीका अरु मुलुकमा कामको प्रलोभन देखाएर नयाँदिल्ली ल्याएको बताएका छन् ।
आयोगका सदस्य किरण नेगीको अगुवाइमा नयाँदिल्लीका नजफगढका दुई स्थानबाट किशोरीको उद्धार गरिएको आयोगले जनाएको छ । तर, किशोरीलाई दिल्लीसम्म ल्याउने ‘एजेन्ट’ फरार भएका छन् । उद्धार गरिएका अधिकांश किशोरीले रोजगारी दिलाउने नाममा ती एजेन्टलाई प्रतिव्यक्ति रू. ५० हजार बुझाएको बताएका छन् । तर, दुईजनाले भने एजेन्टलाई रू. दुई लाख दिएको दाबी गरेका छन् । उद्धार गरिएका सबै किशोरीलाई नेपाल पठाइने आयोगले जनाएको छ ।
विश्वमा कोरोनाले मृत्यु हुनेको संख्या ४२ लाख नाघ्यो, नेपालमा कति ?
सडकमै बाँदरको ‘ग्याङ फाइट’, घण्टौँ ट्राफिक जाम भएपछि प्रहरी नै हैरान, भिडियोसहित
एक सातामा १५ सय बढी तालिवान विद्रोही मारिएको अफगान सेनाको दावी
भारतमा २४ घण्टा भित्र थप ४२ हजार संक्रमित, ६४० संक्रमितको मृत्यु
भारतमा एकै दिन थप ३० हजार संक्रमित, ४१५ संक्रमितको मृत्यु